I-Krisp: Rhoxisa ingxolo yangasemva kwiiNkomfa zeNkomfa | Martech Zone
I-Krisp: Rhoxisa ingxolo yangasemva kwiiNkomfa zakho zeNkomfa
NgoLwesibini, Agasti 11, 2020 NgoLwesibini, Agasti 11, 2020 Douglas Karr
Iveki yam igcwele ukurekhodwa kwepodcast kunye neefowuni zenkomfa. Kubonakala ngathi amaxesha amaninzi kunokuba kunjalo, ezi fowuni zinabantu abambalwa apho abangakwaziyo ukufumana indawo ethe cwaka. Ukunyaniseka kuyandiqhuba.
Ngena i-Krisp, iqonga elinciphisa ingxolo yangasemva. U-Krisp wongeza umaleko owongezelelweyo phakathi kwemakrofoni yakho / isithethi kunye neenkomfa, ezingavumeli nasiphi na isandi sidlule.
Ngokusekwe kwimisindo eyahlukeneyo engama-20,000 50,000, izithethi ezingama-2,500 XNUMX, kunye neeyure ezingama-XNUMX XNUMX zomsindo, uKrisp wafunda kwaye waphuhlisa inethiwekhi ye-neural ebizwa ngokuba krispNet DNN. Bayiqinisile ngokongeza eyethu isosi eyimfihlo, kwaye isiphumo sokwenziwa kwemilingo yomsindo enokubona kwaye isuse nayiphi na ingxolo.
I-Krisp yindawo yabucala, nayo yonke into, kuba yonke into elungiselelwe umsindo yenzeka ngokuthe ngqo kwisixhobo sakho.
Apho kuluncedo ukurhoxiswa kwengxolo yangasemva:
Iingcali usebenza ekhaya okanye kwiindawo zokusebenzela zikawonkewonke
Ootitshala abakwi-Intanethi Ungonwabela iiklasi ezikude ezinemveliso ezingenangxolo kunye nabafundi
Iipodcasters Unokurekhoda ii-podcast ezingenasandi ezikumgangatho ophezulu kubaphulaphuli bakho
Amaqela akude Unokuba neentlanganiso ezingenangxolo
Amaziko okutsalela umnxeba Unokonyusa imveliso yearhente xa besebenza ekhaya (HBA) okanye kwiofisi evulekileyo
I-Krisp inokuhanjiswa ngokukhuselekileyo kwinqanaba leshishini okanye idityaniswe kumaqonga akho nakwizixhobo zisebenzisa i-SDK yazo. Ngapha koko, isoftware yeTekhnoloji ye-Krisp® ye-AI idityaniswe kwizixhobo ezingaphezulu kwesigidi se-100 kwaye sele iphucule ngaphezulu kwemizuzu ye-10 yezigidi zonxibelelwano ngelizwi.
Khuphela iKrisp Simahla
tags: aiingxolo yangasemvaUkucinywa kwengxolo yangasemvaUnkrisinethiwekhi yomnathaUkucinywa kwengxolo
I-Anatomy yokuQhekeka ngo-2020, kunye neeBrand ezenze loo nto
Uluhlu lweendlela ezimfutshane zeKhibhodi ye-Twitter